Ndi umuaka ndi n’ile n’uwa n’uwa - vidiyo - ihe banyere
ND Y BILLIONAIRES B Y B IN N’ INWA - VIDIO
Gaa na Weebụsaịtị anyị: http://lamafache.tv ✅
Ha bara ọgaranya ma bụrụ ndị a ma ama, ha so n’etiti ndị kasị baa ọgaranya n’ụwa. Agbanyeghị, ewezuga akụ na ụba, ha niile nwere otu ihe: nwata. Maka n’ezie, ndị anyị ga-ekwu maka ha taa erubeghị afọ iri anọ. Ya mere, taa, anyị ga-achọpụta ọnụ ndị bụ 40 ndị kasị nta billionaires na mbara ala!
Isi mmalite: https://anotepad.com/notes/ws629xm
Debanye na owa: https://goo.gl/KOb7Ns
Choputa anyi na FB: https://www.facebook.com/lamafachetv/
Maka ihe ndị nwebiisinka zigara email na: contactlamatv@gmail.com
Nke a vidio pụtara na mbụ https://www.youtube.com/watch?v=lewr8DUK90k
argentesi esi baa ọgaranyaesi eme egoDubaiụmụdubai umuakaumu aka bara ụbaForbes
O nwere ike ịbụ 2020, mana ihe kachasị mma Roku sitere na Black Friday 2019 ka dị - BGR
Nick Gordon anwụ; tara ụta maka ọnwụ Bobbi Kristina Brown - people